I-Studio Lucie e-Osnabrück - I-Airbnb
I-Studio Lucie e-Osnabrück
Osnabrück, Niedersachsen, i-Germany
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Monika
Sawubona, isitudiyo sethu uLucie siyifulethi eliphansi endaweni yethu enkulu engu-1300 sqm. Sakhelwe thina ekuqaleni, kodwa sasetshenziswa kancane, ngakho-ke siqasha isikhathi eside. Ifulethi lifana nokuhlala engadini, elinamafasitela amaningi amakhulu asuka phansi kuya ophahleni, ifenisha yamapulangwe kanye nephansi lamapulangwe.
Uhlala emaphethelweni edolobha lase-Osnabrück, ibhasi ledolobha liwuhambo lwemizuzu engu-6 futhi ligijima njalo ngemizuzu eyi-10, ukupaka endaweni ... ungakwazi ukuqasha ibhayisikili. Indawo yokubhaka, ikhemisi iqhele ngamakhilomitha angu-1.
Unefulethi eliphelele kuwe. Engadini unezinketho zokuhlala ezimbalwa wamukelekile ukuzisebenzisa.
4.72 · 46 okushiwo abanye
Indlu yethu isemaphethelweni e-Osnabrück. Imingcele yethu yendawo endaweni yokuhlala yasemadolobheni ezinhlangothini ezimbili, idolobha seliphelile nhlangothi zombili futhi usendaweni ezungezile, ezolimo, ihlathi, ...
Monika ist mein Name, ich bin 56 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder
Uma unemibuzo, ungasishayela ucingo noma usithumele i-imeyili kuleyo ndawo. Asivamisile ukubonana njalo. Kwesinye isikhathi kuvela okuhlukile ...
Hlola ezinye izinketho ezise- Osnabrück namaphethelo